Nhazi Okwu Okike: Akara ókwú, faịlụ, Acronyms na nkọwapụta nkọwa | Martech Zone
Enwere otutu okwu okwu eji eme ihe mgbe ị na-akọwa atụmatụ na ihe omuma a Pagemodo.
Dịka mmekọrịta ọ bụla ị zụlitere, ọ dị mkpa na ha abụọ na-asụ otu asụsụ site na mbido. Iji nyere gị aka gbanye asụsụ gị, anyị sooro ndị ọkachamara na-ese ihe wee nọdụ ala wee chọpụta okwu ha na ndị ahịa na-ejikarị, yana ndị na-eme ka onye ọ bụla mee njem.
Ihe omuma ihe omuma na-enye nkọwa na nkowa nke okwu ndi ozo.
Design Usoro Terminology:
Ihe ntanetị - nhazi nhazi nke n’enweghi ihe nhazi.
Comps - mgbe eriri waya gasịrị, nzọụkwụ na-esote ihe okike, na-abụkarị mgbe imewe na-aga dijitalụ.
Prototype - ogbo nke ozo putara inye ezi echiche banyere ngwaahịa a.
Nkọwapụta Eserese Eserese
Ọbara - ikwe ka ihe owuwu gafere njedebe nke ibe ahụ ka ọnweghị oke.
Grid - ejiri na mbipụta na imepụta dijitalụ iji nyere aka kwado ihe iji mepụta agbanwe agbanwe.
Oghere ọcha - ebe a na-enweghị ihe ọ bụla iji weta ihe ndị ọzọ na ibe.
Onye gụrụ akwụkwọ - na-agbacha site na otu agba na nke ọzọ ma ọ bụ site na opaque ka uzo.
Ihe ndozi - ohere dị n'etiti ókèala na ihe dị n'ime ya.
oke - ohere dị n'etiti ókèala na ihe dị n'èzí ya.
Podị Ihe eji ede ihe
-eduga - otu esi edepụta ederede ederede n'ụzọ kwụ ọtọ, a makwaara dị ka akara elu.
Ilekọta anya - adjustgbazi oghere site na mkpụrụedemede n’okwu.
Typography - nka nke ime ihe di iche iche di nma.
font - nchịkọta ihe odide, akara edemede, akara na akara.
Nkọwapụta Web Design
N'okpuru n'ogige atụrụ - mpaghara nke ibe onye oru gha aghaghi ihu.
anabata - nhazi weebụ nke na-edozi nhazi maka nha ihu nha dị iche iche.
mkpebi - ọnụ ọgụgụ nke ntụpọ kwa inch; 72dpi maka ọtụtụ nseta, 300dpi maka mbipụta.
Agba web - agba eji na weebụ, nke akara akara 6-hexadecimal nọchiri anya ya.
Mpempe akwụkwọ nchekwa - Akara edemede nke ọtụtụ ngwaọrụ kachasị nwere, dị ka Arial, Georgia, ma ọ bụ Times.
Tags: n'okpuru akwana-acha ọbara ọbarammangwakọtankọwammebemmebe okwudpiemeederedegifgrajentịokporojpegkerningeduokemgbochiegwupdfEeppiprototypepsdmkpebianabatargbngwa ngwaokwuederedeuiuxagba weebụweb nchekwa ederedeoghere ọchaọchawaya isi